Kreyg Bellami - वेल्श फुटबल खेलाडी
हालै ज्ञात स्ट्राइकर विभिन्न अंग्रेजी र वेल्श क्लब सम्म थियो Kreyg Bellami, - अपेक्षाकृत को फुटबल क्लब "कार्डिफ", एक नयाँ कोच हालै। मानिस कस्तो प्रकारको?
जुलाई 10, 2016 युरोपेली फुटबल च्याम्पियनशिप समाप्त भयो। यो घटना को peculiarity पहिलो पटक युरोपेली देशहरूको यो 24 टोली भाग लिए थियो। यो पूर्व ठूलो फ्रान्सेली फुटबल खेलाडी मिशेल Platini, युरोपेली फुटबल नेतृत्व गर्ने द्वारा आयोजित थिए, reglamenete यूईएफए मा धेरै परिवर्तन पछि सम्भव भयो। यसलाई जो समावेश भएको प्रतियोगिताको को प्रारूप कमीकमजोरी, सबै को पहिलो संग, फुटबल को स्तर को कमी, त्यहाँ स्पष्ट लाभ हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ। पहिलो स्थानमा, यस्तो लाभ सानो देशहरूमा (फुटबल मा सफल कहिल्यै जो) को प्रतियोगिता को अन्तिम मा प्राप्त र आफूलाई प्रमाणित गर्न एक वास्तविक मौका पायो भन्ने तथ्यलाई समावेश गर्नुहोस्।
Kreyg Bellami र वेल्स टोली
: राष्ट्रिय टोली र यसको व्यक्तिगत खेलाडीहरू यो मौका कहिले एक हडताली उदाहरण, को वेल्स टोली र यसको खेलाडीहरू छ Garet Beyl र हारून Remzi। तिनीहरूले मात्र होइन प्रतियोगिताको अन्तिम भाग आउने, मौका लिए तर अर्ध-फाइनल टूर्नामेंट को मुख्य अनुभूति, वास्तवमा, पुग्यो आइसल्याण्ड को टोली संग भयो। तर, त्यही वेल्स त्यहाँ जो, एक सफल क्लब क्यारियर बाबजुद, राष्ट्रिय टीम को स्तर मा पूर्ण आफूलाई महसुस गर्न असफल भयो खेलाडीको पुरा ग्यालेक्सी थियो। एक प्रमुख उदाहरण रयान Giggs छ। साथै, त्यहाँ सेलिब्रिटी स्थिति नगर्ने धेरै खेलाडीहरू, जो पनि आफूलाई राष्ट्रिय टोली प्रमुख टूर्नामेंट मा व्यक्त गर्न कुनै मौका पाएका थिए छन्। एक विशिष्ट उदाहरण एक फुटबल खेलाडी Kreyg Bellami छ। उहाँले वेल्स राष्ट्रिय टोली 79 खेल, 19 गोल संग, दुर्भाग्य, राष्ट्रिय टोली (यूरो वा फिफा विश्व कप) को कुनै पनि प्रमुख प्रतियोगिताको मा भाग लिन सकेन खर्च, तर।
क्लब क्यारियर क्रेग Bellamy
Kreyg Bellami मा छ जो कार्डिफ, जुलाई 13, 1979 मा जन्म भएको थियो वेल्स को राजधानी। आफ्नो क्यारियर "नर्विच" उहाँले मौसम 1996/1997 साल मा आफ्नो debut गरे र कहाँ उहाँले स्पष्ट पर्याप्त देखाए जसको लागि क्लब, यसको जरा छ। मौसम को अन्त मा त्यो "कोवेंट्री" सारियो। साथै, आफ्नो क्यारियर समयमा उहाँले "न्यूक्यासल संयुक्त", "लिभरपूल", "सेल्टिक", "म्यान्चेस्टर सिटी", "ब्ल्याकबर्न रोवर्स", "पश्चिम हाम" को लागि प्ले सफलता को डिग्री बदलिने संग छ। हाम्रो नायक को प्रिमियर लिग प्ले जो एक खेलाडी, "कार्डिफ शहर", रूप, आफ्नो क्यारियर मई 22, 2014 समाप्त भएको छ। बस फरक क्लब Kreyg Bellami, फुटबल खेलाडी मा, 400 भन्दा बढी खेल खर्च र अधिक 120 गोल।
Kreyg Bellami जसको जीवनी लेख मा मानिन्छ, छैन संग्रामहरू जीतेको द्वारा खराब छ। हाम्रो नायक को पहिलो पदक तिनीहरूलाई द्वारा "सेल्टिक" को अल्पकालीन प्रदर्शन समयमा, 2005 मा विजयी भएको थियो जो स्कटिश कप छ। 2006 मा, मा "लिभरपूल" यो एफए समुदाय शील्ड कब्जा भएको थियो। "चेल्सी" अन्तिम खेलमा पराजित भएको थियो। एउटै "लिभरपूल" संग, तर 2012 मा यो लिग कप कब्जा भएको थियो।
टोलीमा पदक साथै क्रेग व्यक्तिगत पुरस्कार को एक नम्बर छ। आफ्नो पहिलो व्यक्तिगत पदक उहाँले प्रिमियर लिग मा सबै भन्दा राम्रो जवान खेलाडी नाम थियो PFA अनुसार 2001-2002 को उपलब्धि छ। उहाँले पनि महिनाको प्रिमियर लिग खेलाडी (2 पटक) र स्कटिश प्रिमियर लिग (1 पटक) स्वीकारे। यस वर्षको प्लेयर, उहाँले "ब्ल्याकबर्न रोवर्स" (2005-2006) को प्रदर्शन समयमा र वेल्स (2007) मा स्वीकार। हाम्रो नायक को अर्को उपलब्धि उहाँले आठ प्रिमियर लिग टोली मा गोल कि कल्पित गर्न सकिन्छ।
को Mohicans अन्तिम
को फुटबल प्रशंसक बीच कि जो देश बलियो छ च्याम्पियनशिप मा एक फरक राय छ। तर सबै APL संघर्ष र भावना सबै अन्य च्याम्पियनशिप तिर्खा उच्च छ भन्ने सहमत हुनुहुन्छ। एउटै सुविधा क्रेग Bellamy लागू गर्न सकिन्छ। पहिलो परिमाण को तारा, तिनी कहिल्यै तथ्यलाई बावजुद, उहाँले एक खेलाडी कुशल पर्याप्त प्रतिष्ठा थियो। क्रेग क्लब लामो रहन थिएन। यो कारण आफ्नो खेल गुणहरू र चरित्र छैन। क्रेग गरेको क्यारियर भ्रष्टाचार को विभिन्न प्रकार सँगसँगै थियो। जसले एक व्यक्तिमा अरुको अहित गर्ने इच्छा यस्तो ठूलो संख्या देखेको छैन बताए Sunes ग्राहम, - सबैभन्दा aptly आफ्नो चरित्र कोच मध्ये एक छ वर्णन गरे।
खराब स्वभाव हाम्रो नायक को clearest प्रकटीकरण "बार्सिलोना" संग च्याम्पियन्स लिगमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण म्याच अघि देखा पर्यो कि एक घटना छ। Kreyg Bellami, घटनाको पछि जसको फोटो सबै मिडिया बृताकार, टीम-आफ्नो जीवनसाथीलाई लडाइँ थियो। सबैलाई यो टोली बहिष्कार गरिनेछ संघर्ष गर्ने कोच को संरचना मा स्थान विश्वसनीय र पछि तिनीहरूले वास्तवमा, म्याच को परिणाम "लिभरपूल" जित्यो जो थियो कि अपेक्षा गर्दा एक समयमा। Bellamy एक गोल गरेका थिए र एक सहयोग दिनुभयो। साथै, आफ्नो क्यारियर रक्सी प्रयोग, सञ्चालन ईन टोलीका, कोच र पत्रकार संग सम्बन्धित भ्रष्टाचार सँगसँगै थियो। हाल त्यहाँ एकाइ मा खेलाडीहरू लगभग हरेक ब्रिटिश खेलाडी व्यवहार क्षेत्र र पबहरूमा गएर साधारण विचार को क्षेत्र बाहिर "मर्न" तयार र सधैं राम्रो थियो जब पुरानो दिन विपरीत हो, यस्तो चरित्र छ।
सडक र घर भित्रका मा ताप पाइप को थर्मल इन्सुलेशन
एउटा विश्लेषण: "यहाँ Dawns शान्त हुनुहुन्छ।" "यहाँ Dawns शान्त हुनुहुन्छ", Vasiliev: सारांश
"Vikalin": प्रयोग, analogs, समीक्षा लागि सङ्केत गर्छ
एक Savannah के छ र तिनीहरूले कहाँ हो? साभान्नाह दक्षिण अमेरिका
सपना व्याख्या: आय ठूलो माछा र एउटा महत्त्वपूर्ण गर्न साना उद्यम
एस्प्रेसो कसरी तयारी गर्ने
सघन दूध "Alekseevskoe": संरचना, निर्माता, दृश्य र समीक्षा
Taft - कपडा उत्कृष्ट, महान र महंगा